China T uwe elu okpomọkụ pịa igwe factory na-emepụta | Taile
Igwe mgbanaka a nke 38 * 38cm igwe igwe a na-ekpo ọkụ nwere ike ịnyefe foto, okwu na owu, eriri, ígwè, seramiiki, iko na ihe ndị ọzọ, nke kwesịrị ekwesị maka ịnye onyinye, mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike itinye ntinye, mkpụrụedemede, ọnụọgụ na onyonyo na T-shirts, uwe, akpa, akpa oke, jigsaw puzzles, taịliki seramiiki, efere na ihe ndị ọzọ dị larịị. Iji Mee N'onwe Gị onyinye okike maka enyi nwanyị, onyinye maka di, maka ndị enyi, maka ụmụaka, maka ndị agbata obi na onye ọ bụla nọ n'etiti, ị ga-echerịrị ihe ọ masịrị ya. ma juo ha anya n’ubochi ukwu? Ka ị na-eche maka ịme ụdị azụmahịa a n'ọtụtụ nnukwu ahịa? 15 × 15 Sublimation Heat Press ga-enyere aka.
在 后台 设置 Chukwudi 收款 设置 ， 然后 刷新 页面！
1.The dijitalụ ngụ oge akara bụ kemeghi ruo 999 sekọnd. Igwe ihe igwe na-ekpo ọkụ na-egosikwa ihe nlele dijitalụ dijitalụ sitere na 32-455 F. ingdebe ịpị bọtịnụ "KWU" maka nwa oge nwere ike ịgbanwe Fahrenheit.na Celsius temparature azụ na n'ihu
2.The ntuziaka na-emeghe na nso njikwa dị mfe iji rụọ ọrụ na ike ga-gbanwee na mgbali isi na azụ nke igwe. Ike ụlọ ọrụ ya na ogologo oge ya na-enye ohere maka ogologo oge, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu akụ na ụba nwere uru pụrụ iche n'etiti ndị na-asọmpi ya.
3.POWP HE HELỌ KWES --R - - 110 V 1200 W, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na oke ọsọ ọsọ n'ime minit 5 ruo 10 nke ịgbanwu, dabere na ọnọdụ okpomọkụ ị họọrọ. Elu-edu okpomọkụ mkpanaka, irè kwes conduction.
4.Teflon ntekwasa okpomọkụ platen na okpomọkụ na-eguzogide silicone na mpe mpe akwa-eme ka ọ kacha mma t-uwe elu na-ebi akwụkwọ igwe, ị na-obi ike nke a mma n'anya N'ihi. Biko echegbula na uwe gị nwere ike iji ink dee ya. Inye agaghị agbapụta mgbe ị na-ebufe igwe. Na Teflon ntekwasa platen, ọ gaghị adị mkpa ịzụta Teflon Ibé akwụkwọ ọzọ, chekwaa ego, chekwaa mgbalị.
5.LARGE HEAT SUBLIMATION HEAT PRES- na-anabata 15 × 15 ọkụ ọkụ, nnukwu mpaghara ọrụ na-arụ ọrụ iji nyere gị aka iwepụta mmepụta ihe. Gross arọ: 48.5 lbs, pụrụ iche thickened Aluminom kpo oku platen ana achi achi ọbụna na ike nrụgide.
6.MULTIFUNCTIONAL NA MFE EGO: Enwere ike iji igwe oku maka T-shirts, akpa, ute òké, ọkọlọtọ, akwa mkpuchi, wdg Onyinye ekeresimesi a tụrụ aro.
7.Nchịkọta njikwa dijitalụ na njedebe abụọ ahụ. Okpomọkụ Nso: 32 ka 455 degrees F, Oge Ran 0 ruo 999 sekọnd, Oge elektrọnik na njikwa ọkụ, oge akọwapụtara kpọmkwem.
8.Easy na-arụ ọrụ na-emeghe ma na-emechi ike ahụ na mmiri aka; Ergonomic ejiri aka mee ka nkasi obi na arụpụta ihe dị elu;
9.Visible digital oge & okpomọkụ ngosi ga-abụ prefect nnyemaaka n'oge ọrụ gị.
Igwe kpo oku
15 * 15 sentimita asatọ
Nke gara aga: Protale okpomọkụ pịa igwe
Osote: New 5 na 1 ngwakọta ọkụ pịa igwe
Igwe ọkụ ọkụ maka uwe elu
Uwe elu Press Machine
T Uwe Okpomọkụ Pịa
T uwe elu Okpomọkụ Press Machine
T uwe elu Press
T uwe elu Press Machine